ကုန်ကြမ်း 17-Methyltestosterone အမှုန့်ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း - စက်ရုံ
ကုန်ကြမ်း 17-Methyltestosterone အမှုန့် (58-18-4)
ကုန်ကြမ်း 17-Methyltestosterone အမှုန့်ယောက်ျားအတွက် testosterone ဟော်မုန်းမရှိခြင်းပြုမူဆက်ဆံနိုင်သည့်ရှေးအကျဆုံးရရှိနိုင်ပါးစပ် steroids များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပါသည်နှင့်သွေးဆုံးပြီးသားအမျိုးသမီးရင်သားကင်ဆာဆကျဆံတယျ။ ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နိုင်အောင်ဒါဟာအများအပြားခန္ဓာကိုယ်စနစ်များကိုထိခိုက်စေခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ကုန်ကြမ်း 17-Methyltestosterone အမှုန့် (58-18-4) ကဗီဒီယို
ကုန်ကြမ်း 17-Methyltestosterone အမှုန့် (58-18-4) ဖျေါပွခကျြ
ကုန်ကြမ်း 17-Methyltestosterone အမှုန့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်အနိမ့်ဆေးများမှာယောက်ျားလေးများအတွက်အပျိုဖော်ဝင်နှောင့်နှေးစေရန်အဖြစ်ယောက်ျားအတွက်အန်ဒရိုဂျင်ချို့တဲ့၏ကုသမှုအတွက်နှင့်အခြား indications.Such ၏နံပါတ်အတှကျအသုံးပွုသောဒြပ်, နှုတ် activeanabolic-အန်ဒရိုဂျင် Steroid တစ်မျိုး (AAS) ဖြစ်ပါသည် သွေးဆုံးဟော်မုန်းပူတောက်နဲ့တူသွေးဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေများအတွက်ကုထုံး, အရိုးပွရောဂါ, နှင့်အမျိုးသမီးများတွင်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏, နှင့်အမျိုးသမီးများတွင်ရင်သားကင်ဆာရောဂါကုသရန်။
ကုန်ကြမ်း 17-Methyltestosterone အမှုန့်ကိုလည်းဟိုသက်ရောက်မှုနှင့်အတူတစ် methyl ဒြပ်အန်ဒရိုဂျင် receptor agonist ဖြစ်ပါတယ်။ testosterone ဟော်မုန်းန်းမှာကုန်ကြမ်း 17-Methyltestosterone အမှုန့်, cytosolic အန်ဒရိုဂျင် receptors မှချည်နှောင်လျက်, ligand-receptor ရှုပ်ထွေးသော၏နောက်ဆက်တွဲနျူကလီးယားလွှဲပြောင်းအန်ဒရိုဂျင်တုံ့ပြန်မှုမျိုးဗီဇ၏ကူးယူစတင်ဖြစ်ပေါ်သည်။ အဆိုပါမျိုးဗီဇထုတ်ကုန်အထီးလိင်အင်္ဂါနှင့်အလယ်တန်းလိင်ဝိသေသလက္ခဏာများပုံမှန်တိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ အဆိုပါအေးဂျင့်ကိုလည်းနိုက်ထရိုဂျင်, ဆိုဒီယမ်, ပိုတက်စီယမ်, ဖော့စဖောရက်အဖြစ်ကယ်လစီယမ်၏ retention ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ကုန်ကြမ်း 17-Methyltestosterone အမှုန့် (58-18-4) Specifications
ထုတ်ကုန်အမည် ကုန်ကြမ်း 17-Methyltestosterone အမှုန့်
ဓာတုအမည် RU-24400;NSC-9701;17α-Methyltestosterone; 17α-Methylandrost-4-en-17β-ol-3-one
အမှတ်တံဆိပ် NAmE အန်းဒရွိုက်, Metandren, Testred
မူးယစ်ဆေးအတန်းအစား အန်ဒရိုဂျင်; ဟို steroid တစ်မျိုး
CAS အရေအတွက် 58-18-4
InChIKey GCKMFJBGXUYNAG-HLXURNFRSA-N ကို
မော်လီကျူး Formula C20H30O2
မော်လီကျူး Wရှစ် 302.45
အရည်ပျော် Point 162-168 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (lit ။ )
ရေဆူမှတ်: 383.47 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (ကြမ်းတမ်းခန့်မှန်းချက်)
ဇီဝဗေဒတစ်ဝက်-ဘဝ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်3နာရီ (အကွာအဝေး 2.5-3.5 နာရီ)
Solubility H2O: ≤0.5မီလီဂရမ် / mL
Application ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုမှု: Methyltestosterone သို့မဟုတ်သွေးဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေဆက်ဆံဖို့ (အထူးသအရိုးပွရောဂါအဘို့, ပူတောက်နှင့်လိင်စိတ်နှင့်စွမ်းအင်တိုးမြှင့်ဖို့) အထီး၌၎င်း, အနိမ့်ဆေးများအတွက်နှောင့်နှေးအပျိုဖော်ဝင်, hypogonadism, cryptorchidism နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကုသမှုတွင်အသုံးပြုခဲ့ပြီး, အမြိုးသမီးမြားကိုရွှေ့ဆိုင်ရင်သားနာကျင်မှုနဲ့ engorgement နှင့်ရင်သားကင်ဆာ
ကုန်ကြမ်း 17-Methyltestosterone အမှုန့် (58-18-4) ကဘာလဲ?
17-Methyltestosterone, testosterone ဟော်မုန်းတစ်ခုဒြပ်ဆင်းသက်လာတစ်ဦးအန်ဒရိုဂျင်နှင့်ဟို Steroid တစ်မျိုး (AAS) ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်သွေးဆုံးဟော်မုန်းပူတောက်နဲ့တူသွေးဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေများအတွက်ကုထုံး, အရိုးပွရောဂါ, နှင့်အမျိုးသမီးများတွင်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်အနိမ့်ဆေးများမှာယောက်ျားလေးများအတွက်အပျိုဖော်ဝင်နှောင့်နှေး, ယောက်ျားအတွက်အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်၏ကုသမှုတွင်အသုံးပြုသည်, ရင်သားကင်ဆာကုသရန် အမျိုးသမီး (1-3) ။ ဒါဟာအမျိုးမျိုးသော organic sol အပေါက်တွေထဲမှာပျော်ဝင်ပေမယ့်ရေထဲမှာလက်တွေ့ကျကျသည်အရည်ပျော်သောအဖြူရောင်သို့မဟုတ် creamy အဖြူ crystals သို့မဟုတ်အမှုန့်အဖြစ်ပုံပေါ်ပါတယ်။ ဒါဟာပါးစပ်အုပ်ချုပ်ရေးမှဘာသာရပ်ဖြစ်သင့်သည်။
Methyltestosterone ပထမဦးဆုံး 1935 ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ 1936 အတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုများအတွက်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာပထမဦးဆုံးဒြပ် AAS မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏တဦးတည်းဖြစ်ခြင်း, testosterone ဟော်မုန်း၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအပြီးတွင်မကြာမီဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ 17-Methyltestosterone ၎င်း၏ဆေးဘက် function ကိုကျော်လွန်ပြီးလည်းကောင်များနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန်သုံးနိုင်သည်။
ဘယ်လိုကုန်ကြမ်း 17-Methyltestosterone အမှုန့် (58-18-4) အကျင့်ကိုကျင့်
အဆိုပါအန်ဒရိုဂျင် receptor ၏ activation (တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ် DHT အဖြစ်), နှင့် estradiol နှင့်အချို့သောအီစရိုဂျင် receptor များ activation မှပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်: 17-Methyltestosterone နှစ်ခုအဓိကယန္တရားမှတဆင့်ဆိုးကျိုးများယူပါ။
17-Methyltestosterone သည့်အန်ဒရိုဂျင် receptor မှ binding, ပစ်မှတ်တစ်သျှူးဆဲလ်ထဲသို့မဝင်ရနိုငျသညျ, သို့မဟုတျ cytoplasmic အင်ဇိုင်း5α-reductase အားဖြင့်5α-dihydrotestosterone (DHT) ကိုလျှော့ချခံရခြင်း။ DHT တစ်ပင်အားကောင်းအန်ဒရိုဂျင်အာနိသင်အလျှော့ပေးလိုက်လျော, ပို. ပင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အတူတူပင်အန်ဒရိုဂျင် receptor မှချည်နှောင်။ T-receptor သို့မဟုတ် DHT-receptor ရှုပ်ထွေးသောကဆဲလ်နျူကလိယသို့ရွှေ့နှင့်ဟော်မုန်းတုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင် (HREs) ဟုခေါ်ဝေါ်သောမျိုးရိုးဗီဇကို DNA ကို၏တိကျသောဘေ့ပာ, ကိုတိုက်ရိုက်ချည်နှောင်ဖို့ခွင့်ပြုမယ့်တည်ဆောက်ပုံအပြောင်းအလဲခြင်းကိုသည်းခံ။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုနောက်ထပ်အန်ဒရိုဂျင်သက်ရောက်မှုကိုထုတ်လုပ်အမျိုးမျိုးသောမျိုးဗီဇ၏မှတ်တမ်းလှုပ်ရှားမှုထိန်းညှိ။
ကုန်ကြမ်း 17-Methyltestosterone အမှုန့် (58-18-4) သောက်သုံးသော
17-Methyltestosterone နှုတ်အုပ်ချုပ်သည်။ အဆိုပါအကြံပြုသောက်သုံးသောတစ်ဦးချင်းစီစိတ်ရှည်များ၏အသက်, လိင်, နှင့်ရောဂါပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသည်။ သောက်သုံးသောလူနာရဲ့တုံ့ပြန်မှုများနှင့်ဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှုများ၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်သည်နှင့်အညီချိန်ညှိနေသည်။ အန်ဒရိုဂျင်-လစ်လပ်ယောက်ျားအတွက်အစားထိုးကုထုံးများသောအားဖြင့်နေ့စဉ် 10-Methyltestosterone ၏မီလီဂရမ် 50 မှ 17 တောင်းဆိုနေပြီ။ သို့သော်အချိန်နဲ့တပြေးညီနှင့်အရိုးအသက်အရွယ်ကနဦးဆေးထိုးအဆုံးအဖြတ်နှင့်ဆေးထိုးချိန်ညှိအတွက်နှစ်ဦးစလုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ခေါ်ဆောင်သွားရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါနှောင့်နှေးအပျိုဖော်ဝင်များ၏ကုသမှုတွင်အသုံးပြုဆေးများယေဘုယျအားဖြင့်အထက်ပေးထားကြောင်း၏အောက်ပိုင်းအကွာအဝေးအတွင်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တစ်ဦးကန့်သတ်ကြာချိန်အဘို့, ဥပမာ4လအတွင်း6ရန်။ အမျိုးသမီးတွေရင်သားကင်ဆာကုသမှုများအတွက်, အမျိုးသမီးအတွက် 17-Methyltestosterone ၏သောက်သုံးသော 50-200 ထံမှနေ့စဉ် mg ဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်ကြမ်း 17-Methyltestosterone အမှုန့် (58-18-4) အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
17-Methyltestosterone အမှုန့်, ကိုရွှေ့ဆိုင်ရင်သားနာကျင်မှုအထီးထိုသို့သော hypogonadism, cryptorchidism, နှောင့်နှေးအပျိုဖော်ဝင်နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောရောဂါလက္ခဏာတွေကုသရန်နိုင်ပြီး, အနိမ့်ဆေးများအတွက်သွေးဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေဆက်ဆံဖို့ (အထူးသအရိုးပွရောဂါအဘို့, ပူတောက်နှင့်လိင်စိတ်နှင့်စွမ်းအင်တိုးမြှင့်ဖို့) နှင့် engorgement ။
ဒါဟာကြောင့်ကိုယ်ဝန်မှရောင်ရမ်းခြင်း, ရင်သားကင်ဆာကုသရန်အမြိုးသမီးမြားတှငျလညျးကိုအသုံးပြုသည်နှင့်အီစရိုဂျင်၏ထို့အပြင်အတူကသွေးဆုံးလက္ခဏာတွေကုသရန်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအစအမျိုးသမီးအတွက်သွေးဆုံးနဲ့ဆက်စပ်ပြင်းထန် vasomotor ရောဂါလက္ခဏာတွေမှအလယ်အလတ်၏ကုသမှုများအတွက် esterified အီစရိုဂျင်နှင့်အတူပေါင်းစပ်ရာတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။
Buyaas.com ကနေကုန်ကြမ်း 17-Methyltestosterone အမှုန့် (58-18-4) Buy
ကာယဗလလေ့ကျင့်ခြင်းအဘို့အ Methyltestosterone ဖို့ Ultimate လမ်းညွှန်
Stan, KB, ဒေါက်ဂလပ်, SM, အသုံးချဆေးဝါးဗေဒ, ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်, 2011
Basaria, အက်စ်, ငုယင်, တီ, Rosenson, RS, Dobs, AS, သွေးဆုံးပြီးသားအမျိုးသမီးအတွက် Plasma ထဲမှာပါတဲ့အပေါ် methyl testosterone အုပ်ချုပ်ရေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှု, PubMed ဆောင်းပါးများ, အွန်လိုင်း, 2002
Rogerio, AL, သွေးဆုံးခြင်းနှင့်အိုမင်းခြင်း, ယန်း & Jaffe ရဲ့မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် (သတ္တမ Edition ကို), 2014
အဆိုပါ Rat Estrous Cycle အပေါ်ခရစ္စတိုဖာ, JL, Meg, eb, အမ်း, SC, 17α-methyltestosterone ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ, Methandrostenolone နှင့် Nandrolone Decanoate, ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်အပြုအမူ, 1997
ဝီလျံ, Llewellyn ။ , Molecular အာဟာရ, ဟို,2009
Kickman, AT, ဟို Steroid တစ်မျိုး၏ဆေးဝါးဗေဒ, ဆေးဝါးဗေဒဗြိတိသျှဂျာနယ်, PMC 2439524, အွန်လိုင်း, 2018
ကုန်ကြမ်း testosterone Decanoate အမှုန့် (5721-91-5)
ကုန်ကြမ်း Sustanon 250 အမှုန့်
ကုန်ကြမ်း testosterone Enanthate အမှုန့် (315-37-7)
ကုန်ကြမ်း testosterone Cypionate အမှုန့် (58-20-8)